Keewwata(wwan) akka rasaasawwan ida'uu barbaadduu fili.
Kabala Dhangeessuu irraa, sajoo Rasaasawwanii Banaa/Dhaamaa cuqaasi .
Rasaasawwan haquuf: keewwatoota rasaaseefaman filiitii, kana booda sajoo Rasaasawwan Banaa/Dhaamaa, kabala Dhangeessuu irraa, cuqaasi.
Dhangii tarree rasaaseefame jijjiiruudhaaf, Dhangi'i - Rasaasawwanii fi Lakkaawwii filadhu.
Fakkeenyaaf, mallattoo rasaasaa jijjiiruuf, caancala Dirqalawwanii cuqaasi, qabduu sakattaa (...) Arfii aanee jiru cuqaasi, kana booda arfii addaa fili. Akkasuumas, caancala Saxaatoo cuqaasuu, kana booda iddoo Filannoo keessaa akkaataa malattoo cuqaasuu nidandeessa.
Title is: Rasaasawwan Ida'uu